Izindlela ezisibhozo zokuxelela ukuba iWebhusayithi inokuthenjwa
Kwababhali beendaba: Iindlela ezili-8 zokuQinisekisa ukuthembeka kweWebhusayithi
Beward Bias, Khangela uNgcali
I-Intanethi ingaba yinto efanelekileyo yokunika ingxelo kwiincwadana . Idatha eyakuba yifumaneka kuphela kumaphepha ephepha ngoku ingafumaneka ngokukrola kwe mouse, kwaye uphando olwake lithatha iiyure okanye iintsuku lungenziwa ngemizuzu.
Kodwa kuyo yonke i-website ehloniphekileyo, kukho ininzi egciniweyo eneenkcukacha ezichanekileyo, ezingathembekiyo okanye ezithe tye. Ngomngqongqo ongenamava, ongenamava, ii-sites ezinjalo zingabonisa iindawo zamagosa ezinokwenzeka.
Ngaloo nto engqondweni, zikho iindlela ezisibhozo zokuxelela ukuba i-website inokuthenjwa.
1. Khangela amaSayithi avela kwiziko elizinzile
I-intanethi igcwele iiwebhusayithi ezaqalwa imizuzu emihlanu edlulileyo. Oko ufunayo iisayithi ezinxulumene namaziko athembekileyo aye ajikeleze ixesha elide kwaye abe neengxelo ezibonakalisiweyo zokuthembeka nokuthembeka.
Ezi ziza zingabandakanya ezo zikarhulumente zikarhulumente, ii-non-profit organizations , iziseko okanye iikholeji kunye neeyunivesithi.
2. Khangela iiSayithi ezineenkcukacha
Ngeke uhambe kumatshini omoto xa uphula umlenze wakho, kwaye awuyi kuhamba esibhedlele ukuze ulungise imoto yakho. Ndenza iphuzu elicacileyo: Khangela iiwebhsayithi ezinokwakheka ngolwazi olufunayo. Ngoko ukuba ubhala ibali ekugqibeni komkhuhlane, khangela iiwebhsayithi zonyango, njengeziko zokuLawula izifo , njalo njalo.
3. I-Steer Clear Clear Sites
Amasayithi aqhutywa ngamashishini kunye nezoshishino - iiwebhusayithi zazo ziphela ngo-.com - zidla ngokungazami ukukuthengisa into ethile.
Yaye ukuba bazama ukukuthengisa into ethile, amathuba ukuba nayiphi na ingcaciso abayibonakalisayo iya kukhankanywa ngenxa yemveliso yabo. Oko akutsho ukuba amaziko eenkampani kufuneka akhankanywe ngokupheleleyo. Kodwa qaphela.
4. Qaphela i-Bias
Abathathi bamaphephandaba babhala kakhulu malunga nezopolitiko, kwaye kukho ezininzi iiwebhusayithi zezopolitiko ngaphandle.
Kodwa ezininzi zazo ziqhutywe ngamaqela anengxabano ngokuphathelele elinye iqela lezopolitiko okanye ifilosofi. Iwebhusayithi ekhuselekileyo ayinakukwazi ukuxela ngombono onobupolitika ovulekileyo, kwaye ngokufanayo. I-Steer ecacileyo yeendawo kunye ne-axia yezopolitiko ukugaya kwaye kunokuba zikhangele izinto ezingabambisani.
5. Hlola usuku
Njengentatheli oyifunayo ukuba unolwazi oluninzi olufikeleleko olukhoyo, ngoko ke ukuba i-website ibonakala idala, mhlawumbi ilungele ukuhamba ngokucacileyo. Enye indlela yokujonga-khangela "umhla wokuhlaziywa" kwiphepha okanye kwindawo.
6. Khangela kwi-Look's Site
Ukuba isayithi libukeka lingajongwanga kakuhle kwaye lithandwa ngumntu, amathuba akhe adalwe ngabadlali. Ukucaca okucacileyo. Kodwa qaphela - nje ngokuba i-website iyilwe ngobuchule ayithethi ukuba ithembekile.
7. Gwema ababhali abangabonakaliyo
Amanqaku okanye iincwadi ezibhalwa ngabalobi bahlala rhoqo-nangona kungekho rhoqo-kunokwethenjelwa kunemisebenzi eyenziwa ngokungachazwanga . Kunengqiqo: Ukuba umntu uzimisele ukubeka igama labo kwinto ebhale ngayo, amathuba okuma ngolu lwazi luqulethe. Kwaye ukuba unalo igama lomlobi, unako ukuhlala uGoogle ukuba uhlole iinkcukacha zabo.
8. Hlola iZixhumanisi
Iiwebhusayithi ezihloniphekileyo zihlala zidibana. Jonga ukuba yeyiphi iisayithi iwebhusayithi oyikho kwiikhonkco.
Emva koko uye kwiGoogle uze ufake oku kummandla wokukhangela:
Oku kuya kukubonisa ukuba yeyiphi iisayithi ezixhumela kuyo. Ukuba amaziko amaninzi adibanisa kwiwebhusayithi yakho, kwaye ezo ziza zibonakala zihlonishwa, ngoko ke luphawu oluhle.
UKenji Nagai: Umlobi weJapan obulawe eMyanmar
Iingcebiso zokuvelisa iindaba ezimnandi zeendaba
Ukuqala kwababhali beendaba, Ukujonga indlela yokwakha Iindaba zeendaba
Iingcamango ezinhlanu eziPhambili kubalobi
I-Delphi Record Abancedisi beetekethi (kunye nezinye izinto ezilula)
Indlela yokwenza isisombululo esizalisiweyo
Inkokeli yamaNazi uAdolf Hitler ngokufa
I-Hans Moleman Yona mihle kakhulu
Indlela yokugijima kwiBhunga labafundi
Yintoni uBrahmanism: Amaqiniso kunye neNcazelo
Iingcebiso ezibalulekileyo zokunceda amalungu e-LDS afundise izifundo eziphumelelayo
Iintlobo zeGigaba leGazi
Iimpawu zeGoogle - Izixhobo zeMathe
Amanyathelo amahlanu ekuqinisekiseni imithombo ye-Intanethi ye-Intanethi
Ikholeji ye-Bard, i-SAT kunye ne-ACT
IsiFrentshi seMozulu Isigama - Le Temps
Ukuphuhlisa i-GUI yeJava
Izizathu Ezintle Zabafundi Ukuqalisa Ukukhwela Kweqhwa
Ziqhelise ekuKhankeni izinto ezingekho ngqo
Imibukiso yeThelevishini yeeMboniselo yabantwana